Taxanaha Qaybo Ka Mid Ah Warbixintii Guddida Ilaalinta Hantida Qaranku Ka Soo Saareen Gobolada Dalka | FooreNews
Home wararka Taxanaha Qaybo Ka Mid Ah Warbixintii Guddida Ilaalinta Hantida Qaranku Ka Soo Saareen Gobolada Dalka
Taxanaha Qaybo Ka Mid Ah Warbixintii Guddida Ilaalinta Hantida Qaranku Ka Soo Saareen Gobolada Dalka
FoorenewsNov 29, 2015wararka0
Cadadka Maanta Iyo Gobolada Awdal Iyo Gabiley: Wasaaradaha La Qiimeeyey, Miisaaniyadooda, Gaadiidka Iyo Xafiisyada Ay Ku Hawl Galaan
Qormadan oo innoo noqon doonta mid taxane ah waxa aan ku faahfaahin doonaa warbixintii ay dhawaan soo bandhigeen Guddida Dabagalka iyo ilaalinta Hantida Qaranka ee Golaha Wakiiladu taasi oo bannaanka soo dhigtay hannaanka Miisaaniyadda qaranku u gaadho Gobolada dalka iyo guud ahaan sida Wasaaradaha qaranku uga hawl galaan gobolada dalka. Sidoo kale waxa ay warbixintaasi faahfaahin dheeraad ah ka bixinaysay tirada shaqaalaha wasaaradaha ee Gobolada, Mushaharka isu-duwayaashu qaataan, Kuwa aan wax mushahar ahba qaadan iyo arrimaha adeegyada shaqo lagama maarmaanka u ah sida Xafiisyada iyo gaadiidka. Warbixintani waxa ay taabanaysaa Sagaal Gobol oo guddidu muddo 7 maalmood ah ku soo mareen kuwaasi oo kala ah: AWDAL, GABILEY, HAWD, DAADMADHEEDH, SOOL, SARAAR, SANAAG, TOGDHEER IYO SAAXIL.
Guddidan waxa Hogaaminayay Xildhibaan Maxamed Cali Xirsi (Obama) oo ah Guddoomiyaha Guddidan waxaana xubno ka ahaa oo safarkan qiimaynta ah ku wehelinayay Xildhibaanada kala ah: Xil. Cabdiqaadir Jaamac Xaamud, Xil. Ibraahim Axmed Haybe, Xil. Naasir Xaaji Cali Shire, Xil. Rashiid Maxamed Ismaaciil, Xil. Xuseen Ismaaciil Yuusuf iyo Xil. Maxamed Faarax Qabile
Qoraalkan aan ka soo dheeganay warbixintaasi oo ka koobnayd in ka badan 65 Bog, waxa ay guddidu safarkooda ka bilaabeen Gobolka Awdal oo ay ka waraysteen 14 isu-duwe iyo Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Awdal Mudane Axmed Diiriye Cabdilaahi.
14-ka Wasaaradood ee ay guddidani qiimaynta ku sameeyeen ee ay isu-duwayaashooda la kulmeen waxa ay kala ahaayeen: Wasaaradaha Duulista, Qorshaynta, Macdanta, Waxbarashada, Warfaafinta, Caddaaladda, Deegaanka, Ganacsiga, Khayraadka Biyaha, Boosaha, Hawlaha Guud, Dhallinyarada, Diinta iyo Wasaaradda Beeraha.
Qiimaynta Guddidani ku heshay xog-waraysigii Isuduwayaasha Wasaaradaha ee Gobolka Awdal waxa ay noqotay in 14-kaa Wasaaradood 8 ka mid ahi xafiisyo leeyihiin halka aanay 6 ka mid ahi gabi ahaanba wax xafiisyo ah ka lahayn. Wasaaradaha aan gabi ahaanba wax xafiisyo ah ku lahayn Gobolka Awdal waxa ay kala yihiin:
1. Wasaaradda Duuliska
2. Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta
3. Wasaaradda Deegaanka Iyo Horumarinta Reer Miyiga
4. Wasaaradda Ganacsiga
5. Wasaaradda Khayraadka Biyaha
6. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta
Wasaaradaha Xafiisyada ku leh Gobolka Awdal:
1. Wasaaradda Qorshaynta
2. Wasaaradda Waxbarashada
3. Wasaaradda Warfaafinta
4. Wasaaradda Caddaaladda
5. Wasaaradda Boosaha
6. Wasaaradda Hawlaha Guud
7.Wasaaradda Dhallinyarada iyo ciyaaraha
8. Wasaaradda Beeraha
Sideedda Isu-duwe ayaan wax Mushahar ah qaadan sida warbixinta ku xusan halka 14-kaa Wasaaradood Gobolka Awdal kaga hawl galaan gaadiid dhan 8 Gaadhi oo kali ah oo ay ku hawl galaan Wasaaradaha Duulista, Qorshaynta, Waxbarashada, Warfaafinta, Deegaanka, Biyaha, iyo laba baabuur oo Wasaaradda Beeraha ah.
Wasaaradaha Aan Haba Yaraatee Gaadiid Lahayn:
1. Macdanta iyo Tamarta
2. Wasaaradda Caddaaladda
3. Wasaaradda Ganacsiga
4. Wasaaradda Boosaha
5. Wasaaradda Hawlaha guud
6. Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha
7. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta
Tirada shaqaalaha 14-kan wasaaradood ee Gobolka Awdal waa 1,016 iyada oo wasaaradda Waxbarasahdu tahay tan ugu shaqaale badan oo ah 865 wasaaradda ugu shaqo yarina tahay tan Macdanta oo leh 3 shaqaale ah.
Dhinaca Miisaaniyadda Gobolka Awdal Maxaa Ka Gaadhay?
Kharashka Sannadkan ee Miisaaniyadda Qaranka ee ku aaddan Gobolka Awdal waxa uu dhan yahay 4,735,816,274 waxaana Gobolka Awdal ka gaadhay boqolkiiba 1.74% (Boqolkiiba Laba wax ka yar).
Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiiladu waxa ay cagtoodii labaad ee qiimayntoodan ku soo mareen Gobolka Gabiley waxaanay la kulmeen 9 Wasaaradood isu-duwayaashoodii iyo Guddoomiyaha Gobolka Gabiley Mudane Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) oo guddida warbixin faahfaahsan ka siiyey arimahan. Guddoomiyuhu waxa uu si adag uga hadlay sida aanu Gobolka Gabilay u helin maamul daadejin wanaagsan isaga oo tusaale u soo qaatay in xataa gabadha xoghayntiisa ah ee xafiiska kala shaqaysaa aanay u haysan wax Mushahar ah oo aanay qaadan. Isaga oo dhinaca kale badhasaabku sheegay in dhammaan shaqaalaha gobolka laga soo qaato Hargeysa.
Guddidu Wasaaradaha ay la kulmeen ee waraysteen xogtaha ka keeneen waxa ay kala yihiin:
1- Khayraadka Biyaha
3-Dhallinyarada iyo Ciyaaraha
5- Boosaha iyo isgaadhsiinta
6- Dib u dejinta
7- Deegaanka iyo HRM
9- Wasaaradda Caafimaadka
Dhinaca Miisaaniyadda Kharash iyo Mushahar toona uma qorna mana qaataan Isu-duwayaasha Wasaaradaha Biyaha, Warshadaha, Ciyaaraha, Ganacsiga, Boosaha iyo Caafimaadku. Tobankan wasaaradood waxa mushar kooban iyo kharash kooban ka qaata oo kali ah 3 wasaaradood oo kala ah: Isu-duwayaasha Wasaaradaha Dib U Dejinta, Deegaanka iyo Waxbarashada.
Dhinaca Xafiisyada; waxa xafiisyo leh isu-duwayaasha Dhallinyarada, Dib u dejinta, Deegaanka, Waxbarasahda iyo caafimaadka. Waxaan xafiisyo lahayn wasaaradaha Biyaha, Warshadaha, Ganacsiga iyo Boosaha.
Dhammaan Tobankan Wasaaradood ee guddidu qiimaynta ku soo samaysay ee Gobolka Gabiley kaliya hal wasaarad ayaa ka haysata hal Gaadhi, waana Wasaaradda Waxbarashada. Dhammaan 9-ka wasaaradood ee kale wax gaadiid ah ma haystaan.
Guud ahaan Miisaaniyadda Qaranka Gobolka Gabiley waxa ka gaadhay 0.95% (Wax aan gaadhin boqolkiiba Hal). Kharashka baxayna waxa uu dhan yahay 2,595,661,00.
…La Soco Qaybo Kale Iyo Isniinta
Previous PostMuxuu Guddoomiye Cirro Ka Yidhi Wakhtiga Uu Kursiga Wakiilada Iska Casilayo Iyo Musharrax-nimada Cabdisalaan Yaasiin Ee WADDANI? Next PostJamaal Cali Xuseen Oo Gabay Duur Xul Ah Ku Cabiray Dareenkiisa Ku Saabsan Muranka Ka Dhex Aloosmay Isaga Iyo Faysal Cali Waraabe